အေးငြိမ်း - မြန်မာပြည်မှ အလုပ်သမားများ၏ ဘဝ - MoeMaKa Media
Home / Aye Nyein / Community / Experience / Labor / အေးငြိမ်း - မြန်မာပြည်မှ အလုပ်သမားများ၏ ဘဝ
အေးငြိမ်း - မြန်မာပြည်မှ အလုပ်သမားများ၏ ဘဝ
Aye Nyein, Community, Experience, Labor
(မိုးမခ) မေ၁၄၊ ၂၀၂၀
ညက ‘ရေကြည်ရာ’ မှ ပြုလုပ်သော စကားဝိုင်းတစ်ခု ကြည့်လိုက်ရပါသည်။ ကယားပြည်နယ်မှ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအကြောင်း ဖြစ်၏။
ထိုစကားဝိုင်းမှ အလုပ်သမားများ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေရသော အခြေအနေတချို့ကို လှစ်ကနဲ သိမြင်ခွင့်ရလိုက်၏။ လုပ်ငန်းခွင်ဗီဒီယို အပိုင်းကလေးများလည်း ပါ၏။
နေရာမှာ ကယားပြည်နယ် မော်ချီးသတ္တုမိုင်းနေရာ ဖြစ်၏။
သံရည်ကြိုစက် လုပ်သားများလည်း ပါ၏။
အလုပ်သမားများပြောတာ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။
အလုပ်သမားများမှာ အလွန် အန္တရာယ်များသည့် နေရာများ၌ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း လုပ်ကိုင်နေကြရ၏။
၎င်းတို့၏ အန္တရာယ်ကင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကို မည်သူကမှ သောက်ရေးစိုက်ပြီး လှည့်ကြည့်ဖော်မရကြ။
ကိုယ့်အန္တရာယ်ကို ကိုယ့်အသိနှင့်ကိုယ် ကြည့်ကျက်လုပ်နေကြရတာ ဖြစ်၏။
တခြားဟာတွေ မလုပ်နိုင်တောင် အန္တရာယ်များသည့် နေရာများ၌ လုပ်ကိုင်နေကြရသည့် အလုပ်သမားများအတွက်တော့ အန္တရာယ်များ လျှော့ချနိုင်အောင် တစ်ခုခု လုပ်ပေးသင့်သည် ထင်ပါသည်။ သည်အတိုင်း ပစ္စလက်ခတ်ထားတာတော့ မြင်မကောင်းပါ။ သူတို့လည်း သွေးနှင့်ကိုယ်၊ သားနှင့်ကိုယ်၊ လူတွေသာဖြစ်၏။ မိသားစုရှိ၏။ အသက်ရှိ၏။
၎င်းတို့သည် အင်မတန်အဆိပ်သင့်လွယ်သည့် ခဲများကို သည်အတိုင်း နေ့တဓူဝကိုင်နေကြရ၏။
အဆိပ်ရှိသည့် အမှုန်များကို နေ့တိုင်း ရှူနေကြရ၏။
ထိုစကားဝိုင်းတွင် အစိုးရပိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများလည်း ပါ၏။
ခွကျသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်က ပြောပြီး ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်တွေများသည်။
မြန်မာပြည်၏ အဘိဓာန်၌ follow up action ဆိုတာမရှိ။
ဟို့ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၅ သန်းခွဲလောက်၊ မြန်မာပြည်တည်ဦးအစ၊ လူ့သမိုင်းအစကတည်းက တစ်ခါဖူးမှ မရှိခဲ့သေးတာ ဖြစ်၏။ အဲလေ၊ အခုကတော့ အပိုအလုပ်တွေ လုပ်ရမှာစိုးလို့ follow up action ကို မသိချင်ယောင်ဆောင် မေ့ထားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မသိဘူး ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်။ မဖြစ်နိုင်ဟုပင် သည်လို ရိုးရိုးသားသား ထင်ပါရစေ။
ဒါတွေ ချပေးပြီးသွားရင် ဒါတွေကို တကယ်လုပ်သလား၊ လုပ်ထားတာတွေ စနစ်တကျရှိရဲ့လား၊ စုံရဲ့လား၊ စံချိန်မီရဲ့လား၊
လား . . . လား . . . လား . . . ။
ယခု စကားဝိုင်းကိုသာ တကယ် အသုံးချတတ်မည်ဆိုလျှင် အလုပ်သမားတွေအတွက် တကယ် အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတွေ အများကြီး လုပ်လို့ရပါသည်။ ဤစကားဝိုင်း၏ ဘယ်ဘက်ဘေး၌ ထိုင်နေသည့် ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေကြီးနှစ်ယောက် အပါအဝင် လေးယောက်စလုံး ဤခရီးမှ အပြန် တစ်နေရာရာတွင် ထိုင်ကာ ရှေ့ဆက်လုပ်ရမည့် အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ (ဆွေးနွေးမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်က လဖက်ရည်/ဘီယာ စပွန်စာလုပ်ပါမည်။)
ယခု အလုပ်သမားတွေအကြောင်း သိရပြီ။
သူတို့မှာ ဘာတွေလိုနေတယ်ဆိုတာ သိရပြီ။
ပယ်နယ်လစ် မိန်းကလေးကတော့ ဘာတွေလုပ်ဖို့များ စဉ်းစားထားပါသလဲ ဟု နောက်ဆုံးပိတ် မေးပါသည်။
ပြန်ဖြေသည့် အဖြေများကို ကျွန်ုပ်ကတော့ အားမရပါ။
အဲလေ၊ ရုတ်တရက် အမေးခံရလို့ ဘာစဉ်းစားချိန်မှ မရဘဲ ချက်ချင်းပြောလိုက်ရလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
စဉ်းစားချိန်ရရင်လည်း ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမယ်ဟေ့လို့ အစီအစဉ်တွေ ဆွဲကြ၊ တကယ်လုပ်ကြလိမ့်မည်ဟုလည်း -
ကျွန်ုပ်ကတော့ မထင်ရေးချ မထင်ပါခင်ဗျား။
ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲ မြန်မာပြည် အဘိဓာန်မှာ ပျောက်ဆုံးနေသည့်စကားလုံး စုစုပေါင်း (၃) လုံး ဖြစ်သွားချေပြီ။
၂။ တရားဥပဒေ - ဆိုသည့် စကားလုံးများ ပျောက်နေခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ် ပြောခဲ့၏။
ယခု နောက်တိုး -
၃။ Follow up action
နောက်ထပ် ဘယ်နှစ်လုံးများ ထပ်တိုးလာဦးမည်မသိ။
လူအချင်းချင်း လျစ်လျူရှုခြင်း၊ ကင်းရှင်းကြပါစေ။
၁၃ မေလ၊ ၂၀၂၀
အေးငြိမ်း - မြန်မာပြည်မှ အလုပ်သမားများ၏ ဘဝ Reviewed by MoeMaKa on 11:10 AM Rating: 5